Ndị na-emepụta ọnụ ụzọ dị n'elu & ndị na-eweta ngwaahịa - Ụlọ ọrụ China n'elu ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ
Bugharịa ọnụ ụzọ
Nchekwa onwe & Ọnụ ụzọ mpịakọta azụmahịa
Nyefee akụkụ ọnụ ụzọ
Nyefee Up Door Springs
Bugharịa Up Door Machines
Ọnụ ụzọ ndị dị n'elu
Ọnụ ụzọ ebe nchekwa
Akụkụ ọnụ ụzọ ebe nchekwa
Machines ọnụ ụzọ ebe nchekwa
Onye na-eduzi ndị nrụpụta maka ọnụ ụzọ Garage ọkọlọtọ USA nwere uru R dị elu
Anyị bụ ọkachamara n'ichepụta ụlọ ụgbọ ala USA, panel welitere na ọnụ ụzọ ebe a na-adọba ụgbọala na teknụzụ ThermoLock Insulation (R-values ​​17.10).N'agbanyeghị 8'*7', 8'8', 9'*7', 9'*8', 16'*7', 16'*8' ọkọlọtọ size ma ọ bụ ndị ọzọ pụrụ iche size, niile dị n'aka anyị.
Ma ịchọrọ Hinges, Rollers, Cables, Tracks, Struts, Weather Strips, ma ọ bụ Windows, Bestar bụ ụlọ ahịa nkwụsịtụ gị maka mkpa ndozi ọnụ ụzọ ebe ndọba ụgbọala gị niile!
Anyị na-enye nhọrọ dịgasị iche iche nke mmiri iyi na 1.75 "na 2" dayameta n'ọtụtụ nha waya sitere na .1920 ruo .3065.Onye ọ bụla n'ime isi iyi mmiri torsion anyị na-agụnye cone kwụkọtara ọnụ yana ikuku.
Garag Door Windows
Windows Bestar Thermal, nke a makwaara dị ka windo pane abụọ, nwere ike itinye n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ ebe ndọba ụgbọala ọ bụla.Teknụzụ a na-egbuke egbuke nke okpukpu abụọ na-eme ka ike ike nke windo dịkwuo mma site na mkpuchi ma na-egbochi ntinye nke ikuku na iru mmiri n'etiti pane.
Bestar na-enye ngụkọta ngwọta maka mkpa nrụpụta ọnụ ụzọ ebe a na-adọba ụgbọala gị.Anyị bụ ndị pụrụ iche maka Uncoiler Machine, Roll Forming Machine, Slitting Machine, Woodgrain Texture Embossing Machine, Table Foam Machine….
Ọnụ ụzọ ebe nchekwa - tụgharịa ọnụ ụzọ - Torsion Springs - Onye na-emepụta akụkụ OEM & onye na-ebubata kemgbe 2006
Obodo Renqiu, Ógbè Hebei;
© Copyright - 2010-2019 : Ikike niile echekwabara.Ngwaahịa egosipụtara, map saịtị
Mkpọchi diski maka nkeji nchekwa, 8'x7' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 16x7, Ọnụ ụzọ 16'x8' Garage, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 10x8, 8'x8' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa,
Nyefee arịrịọ gịx